အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုများ ခေတ္တပြတ်တောက်မည် ~ The ICT.com.mm Blog
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုများ ခေတ္တပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ မိဘပြည်သူများ၏ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှု မြန်ဆန်တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက် တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ISPနှင့် National Gatewayများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနနှင့် NTT Communicationsတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်ရှိ ISP Networkနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော POP များအား အသစ်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သော ISP Network အသစ်ပေါ်သို့ အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်များတွင် ပြောင်းရွှေ့ချိတ်ဆက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အချိန်များတွင် ပြောင်းရွှေ့ချိတ်ဆက်မည့် POP ဧရိယာအတွင်းရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုများ ခေတ္တ ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး တင်ပြထားပါသည်။
စဉ် ရက်စွဲ အချိန် POP အမည် ပြတ်တောက်ချိန်
၁ ၅-၁၀-၂၀၁၃ ၁၂း၀၀နာရီမှ ၁၂း၁၅နာရီအထိ ဟံသာ၀တီ POP ၁၅မိနစ်
၂ ၈-၁၀-၂၀၁၃ ၁၂း၀၀နာရီမှ ၁၂း၁၅နာရီအထိ မိုဘိုင်း POP ၁၅မိနစ်
၂ ၈-၁၀-၂၀၁၃ ၁၂း၁၅နာရီမှ ၁၂း၃၀နာရီအထိ မရမ်းကုန်း POP ၁၅မိနစ်
၂ ၈-၁၀-၂၀၁၃ ၁၂း၃၀နာရီမှ ၁၂း၄၅နာရီအထိ မောင်ထော်လေး POP ၁၅မိနစ်
၃ ၉-၁၀-၂၀၁၃ ၁၂း၀၀နာရီမှ ၁၂း၁၅နာရီအထိ MICT POP ၁၅မိနစ်
Newer ဓါတ်ပုံပညာကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာက စိန်ခေါ်မှု ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
Older စာရးဆရာ မင်းဒင်၏ “ရာဇဝင်ထဲမှာ ဘူးသီးတွေကို ထားရစ်ခဲ့” စာအုပ် မိတ်ဆက်
10 thoughts on “အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုများ ခေတ္တပြတ်တောက်မည်”
Yellowheart's Phyu says:
Why??what day??how long??
Shady Acid says:
ခနခနပ်က္ေနတာပဲ ေခတၱခဏပ်က္ေတာက္မွာကို ခြင့္လာတိုင္ေနတယ္
Salai Clay Samuel says:
အျမဲတမး္ ျပတ္ေတာက္ေနဒါမ်ား.. ေၾကျငာေနေသးတယ္.. အံ့
Rapper Lay says:
Uthan Htay says:
ဒီထက္ ၁၀ ဆပိုျမန္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁နာရီေလာက္ျပတ္လည္းျပတ္က်ိဳးနွပ္ပါတယ္
Mg Nyi Nyi Lay says:
Chan Myae Aung says:
ဒါဆုိ စက္၀ုိင္းေလး မလည္ေတာ့ဘူးေပါ့…..
Phoe Tpzt says:
လိုင္းတက္ အား နည္းနည္း ေလး တ ခ်ိုုု့ရက္ ေတြဆိုဘယ္ မွကိုတက္ လုိ ့မရဘူး
ဘယ္ေတာ ့မွလဲ လုိင္းေကာင္း မွာမဟုတ္ဘူး